Redmi Pro 2 na Snapdragon 855 ga-enwe njikọ NFC, dị ka Lu Weibing | Gam akporosis
Redmi Pro 2 na Snapdragon 855 ga-enwe njikọ NFC, dị ka Lu Weibing si kwuo
Ekwentị ọhụụ Redmi dị omimi, ekwuru na a ga-akpọ ya Redmi Pro 2, ọ ga-abata n'oge na-adịghị anya na chipset Snapdragon 855, na tupu nke ahụ emee, Redmi onye isi njikwa Lu Weibing kpughere na Weibo ọhụrụ tinye ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ nke ngwaọrụ ahụ.
Ọkọlọtọ ọzọ, nke nwekwara ike ịbụ ngwaọrụ dị ọnụ ala karịa SD855, ga-akwado NFC na ikuku na-akwụ ụgwọ. Okwesiri ikwuputa na Lu kwadoro ihe di oke nkpa na ngwaọrụ ozo nke ga-abia n'oge na-adighi anya.
N’ọnwa gara aga, onye isi ụlọ ọrụ Xiaomi, Lei Jun, hụrụ Redmi SD855 ama ama. Agbanyeghị, n'oge ahụ nhazi ahụ edochaghị anya, mana, n'ihi nkwenye ndị sochirinụ, ha gosipụtara ịdị adị nke ngwaọrụ ahụ.
Ozi Lu Weibing na Weibo banyere Redmi Pro 2 na Snapdragon 855
Lu Weibing ekwenyelarị ụfọdụ atụmatụ nke ngwaọrụ ahụ, dị ka ịdị adị nke nkịta ọdịyo 3,5mm, modul igwefoto atọ, na ndị ọzọ. Ọ bụ ihe doro anya karịa na Ọ ga-abụ njedebe dị elu, ọ dịghị ihe ọzọ na-ebu Qualcomm kasị ike SoC.
Un na-adịbeghị anya leaked video ekpughe ya Ntọala igwefoto okpukpu atọ nwere nyocha mkpisiaka n'azụ. Na mgbakwunye na nke a, a na-atụ anya na ihu ga-ebu ngosi ngosi zuru oke yana obere bekee, nnukwu ihuenyo na-ahụ, yana igwefoto nwere oghere, mana n'adịghị ka usoro Galaxy S10, onye a ga-anọdụ ala na etiti. ọnọdụ ma ọ bụghị n'akụkụ nkuku.
Firmlọ ọrụ China na-ewepụtakarị asịrị banyere Redmi Pro 2, mana njirimara na isi nkọwa nke ngwaọrụ ahụ ka na-agbanye. Fọdụ na-ekwu na ekwentị ọhụrụ ahụ nwere ike ịbụ nke gọọmentị n'ọnwa a. Tupu nke ahụ, Redmi ga-ekpughere Redmi Y3 na Eprel 24 na igwefoto selfie nke 32 MP, ọkwa mmiri na batrị ka ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi Pro 2 na Snapdragon 855 ga-enwe njikọ NFC, dị ka Lu Weibing si kwuo
Mba, Huawei etinyebeghị mbido nke Mate X